U-Oppo uvavanye ngempumelelo inethiwekhi ye-5G kwi-Oppo R15 eguqulweyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
U-Oppo uvavanye ngempumelelo inethiwekhi ye-5G kwi-Oppo R15 eguqulweyo ngemodem yeX50
Njengokuba lo nyaka uqhubeka kwaye olandelayo usondela, siyabona, ngakumbi nangakumbi, ukuba abavelisi abaninzi abahambahambayo basebenza ukuba babe ngabokuqala ukusizisela i-smartphone ekwaziyo ukuxhasa inethiwekhi ye-5G. Injalo imeko yeNokia, Samsung, ZTE, LG kunye nezinye, kunye ne-Oppo, inkampani esandula ukuveza Uvavanyo oluyimpumelelo lweselfowuni i-Oppo R15 ngalo mqondiso.
Ngokweengxelo, ifemi isebenzise ingxelo eguqulweyo yale modeli. Iza ixhotywe ngemodem yeQualcomm X50 5G, eyaphunyezwa kuvavanyo. Siyakwandisa!
Ingxelo isityhilele oko Unxibelelwano lwe-5G lwalusekwe kwi-3GPP yokuKhutshwa komgangatho we-15 we-NSA, Esebenzisa i-10 MHz bandwidth ye-4G LTE Band 5 kunye ne-20 MHz bandwidth ye-5G NR n78 band.
Okwangoku, Ibhendi ye-5G NR n78 yeyona bhanti imiselweyo ye-5G ehlabathini. Ngokukodwa, kunokuba ibhendi yokuqala ye-5G ukuba ikhutshwe kunyaka olandelayo. Ke ngoko, eli bhanti libaluleke kakhulu kwintengiso yebatch yokuqala yeemveliso ze5G kwintengiso.
Fumanisa: U-Oppo usebenza kwifowuni yakhe yokuqala ye-5G
Ngaphambili, umongameli weZiko loPhando lwe-OPPO, U-Liu Chang uthe inkampani izakukhawulezisa uphuhliso lweefowuni zayo ze-5G, ke ngekhe kumangalise ukuba olu phawu luqala ukusibonisa umnxeba oxhasa le nethiwekhi yesantya esiphezulu. Kwatyhilwa kwakhona, ngoMeyi, ukuba umenzi wenza umnxeba wevidiyo ye-5G ngesandla kunye neQualcomm, omnye wabalingane bayo abaphambili kweli candelo.
Okwangoku, inkampani ixele ukuba izakuqhubeka nokwenza iimvavanyo kwizixhobo ezininzi kwaye iyakunikezela ngenxalenye enkulu yexesha layo, izixhobo kunye neenzame ekuphunyezweni kwenethiwekhi kwifowuni yayo yokuqala ye-5G, eyayiza kufika kwangoko 2019.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Oppo uvavanye ngempumelelo inethiwekhi ye-5G kwi-Oppo R15 eguqulweyo ngemodem yeX50
Imowudi emnyama iza kwifowuni kaGoogle